पाठेघर खस्ने समस्या के हो? कस्ता व्यायाम गर्न सकिन्छ? (तस्बिरसहित) :: Setopati
रामदेवी महर्जन फागुन १६
तस्वीरः रामदेवी महर्जन
महिलाहरूलाई हुने समस्यामध्ये पाठेघर खस्नु एक प्रमुख समस्या हो। यसलाई अंग्रेजीमा ‘युटेरो भजाइनल प्रोल्याप्स’ भनिन्छ।
पाठेघर योनीमार्गमा आउनुलाई पाठेघर खसेको भनिन्छ। पाठेघर हाम्रो पेल्भिक क्याभिटीभित्र मूत्रथैलीको पछाडि, मलाशयको अगाडि हुन्छ। यसलाई मांसपेसी र लिगामेन्टले पेल्भिक क्याभिटीमा अड्याएर राख्न मद्दत गर्छ। जब यो मांसपेशी र लिगामेन्ट्सको लचकतामा कमी हुन्छ, कमजोर हुन्छ वा कुनै समस्या आउँछ, तब पाठेघर आफ्नो ठाउँ छोडी तलतिर झोलिन्छ। यसरी झोलिनुलाई नै पाठेघर खस्नु भनिन्छ।
- सामान्यतः वृद्ध महिला। महिनावारी बन्द भएका ४०-४५ वर्ष माथिकालाई।
- धेरै बच्चा पाइसकेका महिला। अचेल बच्चा नजन्माएकाहरूमा पनि यो समस्या देखिन थालेको छ।
- सुत्केरी अवस्थामा बलपूर्वक र भारी काम गर्नेमा। सुत्केरी अवस्थामा पाठेघर फुलेको हुन्छ। फुलेको पाठेघर ठीक ठाउँमा आउन करिब दुई महिना लाग्छ। पाठेघर ठीक ठाउँमा नआइकनै भारी काम गरेमा पाठेघर खस्ने समस्या हुन सक्छ।
- पाठेघरमा फाइब्राइट अथवा ट्यूमर भएमा।
१. पाठेघर झोलिनु तर बाहिर नदेखिनु- यस अवस्थामा योनीमार्गमा केही भारी चिज आएर बसेजस्तो तल्लो पेट भारी हुन्छ। पाठेघर झोल्लिएको हुन्छ तर बाहिरबाट देखिँदैन।
२. पाठेघर बाहिर योनीमार्गमा देखिनु- यो अवस्थामा पाठेघर अर्थात् गर्भाशयको मुख योनीमार्गभन्दा बाहिर निस्कन्छ र बाहिरबाट देखिन्छ।
३. पाठेघर पूरै बाहिर झोलिनु- यस अवस्थामा गर्भाशय पूरै योनीमार्गबाट बाहिर झोलिएको हुन्छ।
- सुरूसुरूमा पेटको तल्लो भागमा अप्ठ्यारो हुन्छ। योनीमार्गमा केही भारी चिज आएर बसेजस्तो हुन्छ।
- तल्लो पेट र कम्मर वरिपरि दुख्छ।
- पिसाब गर्दा केही चिज आएर बसेजस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ।
- पिसाब चुहिन्छ वा कहिलेकाहीँ पिसाब बन्द पनि हुन्छ।
- यो धेरै भयो भने हिँड्न र बस्न समेत अप्ठ्यारो हुन्छ।
- हाम्रो शरीरको गतिविधि र अंगस्थिति नमिल्नु। यो भनेको हिँड्दा, बस्दा, उभिँदा वा अन्य अवस्थामा शरीर बांगो बनाउनु, ढल्काउनु, निहुरिएर वा कुप्रो परेर बस्नु हो। त्यसैगरी भारी सामान उठाउँदा बढी बल लगाउनु, सुत्केरी अवस्थामा बलपूवर्क भारी सामान उठाउनु वा भारी काम गर्नु, धेरैबेर उभिएर बस्नु।
- कब्जियत हुँदा कनीकनी बल गरेर दिसा गर्नु।
- निरन्तर खोकी लाग्ने समस्या हुनु।
- पेल्भिक मांसपेशी र लिगामेन्ट्स कमजोर हुनु।
- धेरै बच्चा जन्माउनु। बच्चा जन्मिँदा पाठेघरमा धेरै चोटपटक लाग्नु।
- अत्यधिक तौल बढ्नु।
- मद्यपान र धूमपान गर्नु।
- यौनसम्पर्क शैलीले पनि प्रभाव पार्छ। पछाडि फर्केर धेरै यौन सम्पर्क गर्ने गर्नाले पाठेघरमा असर पर्न जान्छ।
- पाठेघरमा ट्यूमर हुनु।
- अंगस्थितिमा मेरुदण्ड मुख्य हुन्छ। यदि हाम्रो अंगस्थिति ढल्किने, कुप्रो पर्ने भएमा मेरुदण्डको अवस्थामा असर पर्छ र पाठेघर थिचिएर तल झर्ने समस्या हुन्छ। हिँड्दा, बस्दा, सुत्दा, पढ्दा जुनसुकै काम गर्दा पनि सधैं मेरुदण्ड सोझो, खुकुलो हुनुपर्छ। यसले सबै अंग ठीक ठाउँमा बस्न सहयोग पुग्छ।
- भारी सामान हतारहतार र बलपूवर्क नउठाउने। उठाउँदा शरीरको सन्तुलन मिलाएर लामो र गहिरो सास तानेर विस्तारै उठाउने। तर, समस्या भएका बेलामा कुनै पनि भारी सामान र भारी काम नगर्ने।
- शारिरीक वेगहरू जस्तै खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा सावधानीसाथ गर्ने। यसले पनि अप्ठ्यारो गराउँछ।
- निरन्तर धेरैबेर उभिएर नबस्ने। धेरै बेर उभिएर काम गर्नुपरे केही बेर आराम गर्ने र फेरि काम गर्ने।
- दिसा गर्दा बलले कनेर नगर्ने।
तौल बढी भएका व्यक्तिले आफूले खाइरहेको खाना (भात, ढिँडो वा रोटी) को भाग २५ प्रतिशत घटाउने। जसअनुसार एक भाग अन्न, दुई भाग हरियो साग-तरकारी र उत्तिकै मात्रामा सलाद लिने। यसरी अन्न घटाएर तरकारी र सलाद बढाएर लिए पेट पनि अरामले भरिने र बढी भएको तौल पनि घट्दै जान्छ।
यसमा आराममा बस्नु सबभन्दा सरल उपचार हो। आराममा बस्दा वा सुत्दा हिपमुनि सिरानी राखेर, टाउकोमा सिरानी नराखी बद्धसवासन, सवासन वा पुतली आसनमा आराम गर्ने। सुत्दा पनि हिपमुनि तकिया (करिब ४ इन्च जतिको) राखेर टाउकोमा सिरानी नराखी सुत्ने।
- चिसो पट्टी दिनेः हल्का बाक्लो गरी दुइटा सफा कटन कपडा नाइटोदेखि पूरै तल्लो पेटसम्म ढाक्ने लिने। पानी हात राखेपछि ठिहिराउने हुनुपर्छ। यसका लागि पानीमा दुई-चार टुक्रा बरफ राख्ने। अब हिपमुनि सिरानी राखेर बद्धसवासन वा पुतली आसनमा बस्ने। कपडालाई पानीमा चोबेर हल्का निचोरी नाइटोभन्दा दुई औंला माथिदेखि पूरै तल्लो पेट ढाक्ने गरी राख्ने। कपडा १-१ मिनेटमा परिवर्तन गर्ने।
- यस अवस्थामा आराममा रहनुपर्छ तसर्थ खानामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। खानामा रेसा-छोक्राबोक्रा नभएका भारी र पाचन हुन गाह्रो हुने खानेकुरा नखाने। त्यसैगरीक गर्मी बढाउने चिया, कफी, मदिरायुक्त पदार्थ, गरम मसला आदि नखाने।
के हो मूल बन्द?
आफूलाई सजिलो हुने आसन- बज्रासन, पद्यमासन वा सुखासनमा बस्ने। अब सास तान्दा मलद्वार तथा योनी खुम्चाएर जति सकिन्छ, माथि नाभीतिर तान्ने र विस्तारै सास छोड्दै मलद्वार तथा योनीलाई तल फुकाउने।यसले पेल्भिक वरपरका मांसपेशी र लिगामेन्ट्स बलियो र लचिलो बनाउन सहयोग गर्छ। मूल बन्द व्यायाम क्रममा, आराम गर्दा वा अन्य समयमा पनि गर्न सकिन्छ।
पाठेघर खस्ने समस्यामा गर्न सकिने योग आसनहरूः
१. पुतली आसन (मूल बन्द लगाएर)
डंडासनमा (भुइँमा दुवै खुट्टा सिधा राखेर) बस्ने। अब दुवै खुट्टा घुँडासम्म खुम्च्याएर दुवै पैताला जोड्ने र दुवै हातलाई पैतालामुनि लगेर लक गर्ने। सास तान्दै मलद्वारलाई माथि पेटतिर तान्ने। दुवै घुँडा पनि माथि उठाउने र विस्तारै सास छोड्दै मलद्वारलाई तल फुकाउदै घुँडाले दायाँबायाँ भुइँ छुवाउने प्रयास गर्ने। दस पटक गर्ने। यसो गर्दा मेरूदण्ड, गर्धन र शीर सिधा हुनुपर्छ।
२. मर्जरी आसन (क्याट पोज)
बज्रासनमा बस्ने र विस्तारै हिपलाई उठाएर दुवै घुँडाले टेकेर सिधा हुने। अब शरीरलाई अगाडि झुकाएर दुवै हातले अगाडि भुइँ टेक्ने काँध बराबर सिधा राखेर। विस्तारै लामो सास तान्दै (मलद्वारलाई माथि तान्ने) टाउको तथा गर्धन माथि लगेर आकास हेर्ने र ढाडलाई तलतिर पठाउने। यस अवस्थामा ढाडमा खाल्डो जस्तो बन्छ। अब सास छोड्दै (मलद्वारलाई पनि तल छोड्दै) मेरूदण्डलाई जति सकिन्छ त्यति माथि धनुष आकारमा लाने र टाउकोलाई तल लगेर चिउँडोले छाती छुने प्रयास गर्ने। पाँच पटक गर्ने।
दुवै हातले भुइँमै टेकिरहने। सास छोड्दै दुवै खुट्टालाई पछाडि लगेर पैतालाले ढ्याप्प भुइँमा टेक्ने। कम्मरलाई जति सकिन्छ त्यति माथि उठाउने। टाउकोलाई दुई हातको कुहिनाको बीचमा राख्ने र नाइटोतिर हेर्ने। ठीक पहाड जस्तै आसन बन्छ। यस अवस्थामा रहेर मूल बन्द पाँच पटक गर्ने।
अब बज्रासनमा आउने र सास तान्दै दुवै हातलाई माथि ९० डिग्रीमा उठाउने। सास छोड्दै दुवै हात भुइँमा राखेर टाउकोले भुइँ छुवाइ राख्ने। यस अवस्थामा रहेर मूल बन्द पाँच पटक गर्ने।
विस्तारै उत्तानो सुत्ने। दुवै खुट्टा घुँडासम्म खुम्च्याउने र दुवै हातलाई दुवै पैतालाको दायाँबायाँ राख्ने। अब सास तान्दै मलद्वारलाई पनि माथि तान्दै मेरुदण्डलाई गर्धनसम्म माथि उठाउने र विस्तारै सास छोड्दै मलद्वारलाई फुकाउँदै तल झर्ने। पाँच पटक गर्ने।
उत्तानो नै सुत्ने। अब सास तान्दै हात, खुट्टा र टाउकोलाई एकै साथ समानान्तर हुने गरी भुइँबाट उठाउने र मलद्वारलाई पनि माथि उठाउने। दस गन्ने र विस्तारै सास छोड्दै मलद्वारलाई पनि तल फुकाउँदै पहिलेको स्थितिमा फर्कने। तीन पटक गर्ने।
उत्तानो नै रहने। विस्तारै सास तान्दै दुवै खुट्टा र दुवै हातलाई ९० डिग्रीमा उठाउने। यस अवस्थामा रहेर पाँच पटक मूल बन्द गर्ने र बीचमा फर्कने।
८. साइकल चाल
विस्तारै सासको तालमा खुट्टालाई साइकल जस्तै चलाउने। पाँचदेखि दस पटक।
उत्तानो नै सुतेर दुवै खुट्टा माथि उठाएर घुँडासम्म खुम्च्याउने। अब सास तान्दै मलद्वारलाई पनि माथि तान्दै दुवै घुँडा जोड्ने र सास छाड्दै मलद्वार पनि फुकाउँदै दुवै घुँडालाई जति सकिन्छ त्यति दायाँ बायाँ फैलाउने। यसरी पाँचदेखि दस पटक गर्ने।
उत्तानो नै रहने। सास तान्दै दुवै खुट्टा र जिउ उठाउने। दुवै हातले कम्मरमा टेको दिएर सोझो गर्ने ९० डिग्रीमा, यस अवस्थामा टाउको, काँध र कुहिनाले मात्र भुइँ छोएको हुन्छ। यस अवस्थामा रहेर पाँच पटक मूल बन्द लगाउने र सास छोड्दै बीचमा आउने।
अब सास तान्दै दुवै खुट्टा ९० डिग्रीमा उठाउने र सास छोड्दै दुवै खुट्टा टाउको पछाडि लगेर पैतालाले भुइँ छुवाउने। हात भने पछाडि सिधा राख्ने वा कम्मरमा टेको लगाउने। यस स्थितिमा रहेर सास तान्दै मलद्वारलाई माथि तान्ने र सास छोड्दै तल छोड्ने। तीनदेखि पाँच पटक गर्ने। अब सास तान्दै बीचमा आउने र सास छोड्दै खुट्टालाई भुइँमा राख्ने।
१२. आराम आसनः बुद्ध सवासन
हिपमुनि तकिया राखेर उत्तानो सुत्ने। दुवै खुट्टा घुँडासम्म खुम्च्याउने। दुवै हात गर्धनमुनि लक गरेर राख्ने र आराममा बस्ने। आराममा बस्दा पनि मूल बन्द गरेर बस्ने। यो निकै लाभदायक हुन्छ।
- कुनै पनि आसन व्यायाम बलपूर्वक सकिनसकी नगर्ने। विस्तारै सासमा ध्यान दिएर मात्र गर्ने।
- धेरै गाह्रो भएमा आहार मिलाएर आराममै बस्ने।
- सर्वाङआसन र हलासन गर्दा जति सकिन्छ त्यति मात्र गर्ने। नसकेमा नगर्ने।
- अपरेशन गरेको ६ महिनापछि मात्र हल्का व्यायाम गर्न सकिन्छ।
पाठेघर खस्ने समस्या हुनेबित्तिकै आराममा रहनुपर्छ। आहारमा कब्जियत नहुने आहार हुनुपर्छ भने विहार सही हुनुपर्छ। आहार र विहार मिलाएर यी आसनको नियमित अभ्यासले समस्या कम गर्न निकै मद्दत गर्छ। यसो गरेर पनि ठीक भएन वा धेरै नै झरिसकेको छ भने विकल्प शल्यक्रिया नै हो। यसपछि पनि आहार र विहार भने मिलाउनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७, ०३:२८:००